တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် သဘာဝအမွေအနှစ် နာမည်ကျော် အော်မေတောင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် အော်မေတောင်ထိပ်၏ နံနက်ခင်းရှုမြင်ကွင်းအား ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ချိန်တူး၊ ဇွန် ၁၀ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အော်မေတောင်သည် တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် ချိုင့်ဝှမ်းဒေသ အနောက်တောင်ဘက်စွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ ခန့်ညားမှု၊ သာယာလှပမှု၊ ဆိတ်ငြိမ်မှု ၊ မတ်စောက်မှုနှင့်အတူ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများ ရှိသော သဘာဝရှုခင်းအလှ၊ ဇီဝအရင်းအမြစ် ကြွယ်ဝမှုနှင့် သမိုင်းယဉ်ကျေးမှု အကြောင်းတရားစုံလင်မှုများကြောင့် အော်မေတောင်သည် လူသားတို့၏အဖိုးတန်မြေ ဖြစ်ပေသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် အော်မေတောင်ထိပ် လေးမျက်နှာထိုင်တော်မူဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အား ဇွန် ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် အော်မေတောင် ခရီးသွားနေရာ၏ ဇရပ်တန်ဆောင်း၊တံတားအလှ မြင်ကွင်းအား ဇွန် ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် အော်မေတောင်ပေါ်၊ တောင်ထိပ် ရှုမြင်ကွင်းအား ဇွန် ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် အော်မေတောင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် သံဃာတော်တစ်ပါးအား မေ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် လဲ့ဆန်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးအား ၂၀၁၉ ခုနှစ် မေ ၂၉ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် လဲ့ဆန်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးသို့ ခရီးသွားများ လာရောက်နေသည်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် လဲ့ဆန်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးရှိရာနေရာသို့ သင်္ဘောဖြင့် ဖူးမြော်လည်ပတ် ကြည့်ရှုနေကြသည်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် အော်မေတောင်ပေါ်၊ တောင်ထိပ် ရှုမြင်ကွင်းအား ဇွန် ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် အော်မေတောင် လေတုန့်ဖိန်ရှိ ရောင်တော်ပွင့် မြင်ကွင်းအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်းပြည်နယ် အော်မေတောင်ပေါ်၊ တောင်ထိပ် ရှုမြင်ကွင်းအား ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနိကဆိုင်ရာ တောင်ကြီး ၄ တောင်အနက် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည့် အော်မေတောင်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ပစ္စည်းများ၊ သာသနိကအဆောက်အဦများ၊ စာပေပန်းချီကျောက်စာများ စသည့် သမိုင်းအမွေအနှစ်များ ရှိသည်။
အော်မေတောင် အရှေ့ဘက် တောင်ခြေတွင် လဲ့ဆန်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီး ရှိသည်။ ယင်း ဧရာမ ထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကြီးသည် မင်ကျန်း၊ တာ့သု၊ ချင်းရီး မြစ်ကြောင်းသုံးသွယ် ဆုံစည်းရာနေရာကို မျက်နှာတော်မူထားခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်ကိုအမှီပြု ထွင်းထုထားသော ဉာဏ်တော်အမြင့် မီတာ ၇၀ ကျော် ရှိသည့် လဲ့ဆန်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးသည် နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ကြာ သမိုင်းကြောင်းရှိပြီး “တောင်တစ်တောင် ဘုရားတစ်ဆူ၊ ဘုရားတစ်ဆူ တောင်တစ်တောင်” ဟူသော အမည်ဖြင့် ကျော်ကြားသည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် အော်မေတောင်- လဲ့ဆန်းဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ယူနက်စကို (UNESCO) က ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သဘာဝအမွေအနှစ်စာရင်း၌ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ (Xinhua)
1. 晨曦中的峨眉山景区金顶和万佛顶（6月6日摄，无人机照片）。 新华社记者 江宏景 摄
2. 峨眉山景区金顶的四面十方普贤坐像（6月5日摄）。新华社记者 江宏景 摄
3. 峨眉山景区清音阁的牛心亭和双飞桥（6月5日摄）。新华社记者 江宏景 摄
4. 峨眉山景区金顶和万佛顶（6月6日摄，无人机照片）。新华社记者 江宏景 摄
5. 在峨眉山景区遇仙寺，一位僧人远眺群峰（5月18日摄）。新华社记者 江宏景 摄